Izabelo ze-EV kooVimba-Funda ukuRhweba
tag: Izabelo ze-EV
Thenga iiSabelo zeAlbemarle -Ngoyena Mvelisi mkhulu weLithium yeeBhetri ze-EV
IAlbemarle (ALB) ngowona mvelisi mkhulu we-lithium yesithuthi sombane (EV) kunye nokwandisa ukusebenza kwayo emva kokufaka inkontileka yokuthenga inkampani yaseTshayina iGuangxi Tianyuan New Energy Materials ngezigidi ezingama-200 zeedola.
Ixabiso lesabelo lenkampani liqhube kakuhle kulo nyaka kodwa kuninzi okunokuza neemfuno zebhetri ye-lithium eqhutywa kukunyuka nokunyuka kwezithuthi zombane.
Ibango le-lithium liqikelelwa yi-Albemarle imbangi ye-SQM-umvelisi wesibini ngobukhulu we-lithium kwihlabathi-ukuya kuma-40% ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka ukuya kwiitoni ezingama-95,000, ngasemva kwe-EV yokufuna ukunyusa i-150% kwisiqingatha sokuqala se-2021.
Izabelo zeAlbemarle zifikelele kumaxesha aphakamileyo angama- $ 246 nge-10 Septemba, ukuya kuthi ga kuma-40% unyaka ukuza kuthi ga ngoku. Isitokhwe sivale i-3.46% ngolwesiHlanu, amaxabiso asezantsi ngama-215 eedola kwaye ngoku sithengisa nge- $ 216.
Inkampani yeekhemikhali izinze eMantla Carolina kwaye ishishini layo lahlulwe langamacandelo amathathu- iLithium, iBromine Specialties kunye neCatalysts, ezisebenza kwihlabathi liphela (e-US, eChile, eYurophu, e-Australia, e-Asia nase-Middle East).
Amakhandlela osuku olunye-1 nge-11 ka-Okthobha ka-2021. Thenga iAlbemarle kwi-eToro nge-0% yekhomishini
I-Albemarle inyusa ukonyuka okuphindwe kane kwi-EPS
Kwiinyanga ezintandathu ukuya kumhla wama-30 kuJuni ka-2021, ingeniso ibinyuke nge-7% ukuya kwi-1.6 yezigidigidi, ngelixa ingeniso iyonke inyuka isuka kwi-192.8 yezigidi ukuya kwi-520.3 yezigidi zeedola. Ingeniso yesabelo ngasinye kwi-Q2 yayiyi- $ 3.62, emele ukonyuka okuphindwe kane ngexesha elifanayo kunyaka ophelileyo ($ 0.80).
Ingeniso yecandelo leBromine Specialties inyuse i-21% ukuya kwi-560 yezigidi, ngelixa i-Lithium ebaluleke kakhulu kunye neCandelo leZinto eziPhambili zibone ingeniso iqhubela phambili nge-15% ukuya kwi-599.3 yezigidi.
I-Albemarle khange ihlale kamnandi. Kwikota yesibini iye yahlengahlengisa ishishini ngokulahla icandelo leeNkonzo zeKhemesti entle kwi-WR Grace & Inkampani.
Le ntengiso inyuse i-570 yezigidi zeedola, ezinkozo (i-300 yezigidi) kunye ne-equity (i-270 yezigidi).
Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi malunga urhwebo lwesitokhwe ngaphambi kokungena, emva koko funda isikhokelo sethu sokuqala.
Abatyalomali bavuyiswa kukuva ukuba inkampani izakuyisebenzisa kakuhle imali kwaye ijolise ngakumbi kwisicwangciso sayo sokukhula sexesha elide esigxile kwishishini le-lithium. Kuyakhuthaza, kwingxelo yayo ye-Q2 inkampani iqinisekisile ukuba ukusebenza kwe-lithium kwandisiwe kwisiqingatha sokuqala sonyaka.
Kwakhona, njengoko bekutshiwo ngaphambili, ukufunyanwa kweGuangxi Tianyuan kongeza kwimveliso yayo. Isivumelwano siya kugqitywa kwikota yokuqala ka-2022.
Ngokuqinisekileyo iAlbemarle iyabiza, kumaxabiso afumana umvuzo angama-43, ikwindawo yesithathu kwezingama-63 iinkampani ezikwicandelo leekhemikhali. Kodwa ngoqikelelo lwe-EPS yokukhula kwe-65% ufumana uninzi lwe-bang yakho.
Ukongeza, abo baphumelela ngexabiso eliphezulu lesi sitokhwe kufuneka bathuthuzelwe ngokwazi ukuba sinomda osebenza ngokusempilweni, bebeka kakuhle ngaphambi komndilili wecandelo lawo kwi-28.9%, kwinqanaba lesithathu kwiikampani zeekhemikhali ezingama-85.
Bullish njengamaxabiso ekhontrakthi avareji ayaqhubeka enyuka
Umhlalutyi we-Berenberg u-Sebastian Bray unyusa ithemba kwinkampani. Siqikelela amaxabiso ekhontrakthi yexesha elide ye-Albemarle ye- $ 16,000 ngetoni nganye, ikakhulu phambi kwe-Albemarle ka-2020 ngamaxabiso ekhontrakthi ayi- $ 13,000… Silindele ukuba umvuzo ka-Albemarle uza kukhula ngamandla ngasemva kwezongezo zamandla e-lithium. Siqikelela ukuba imveliso ka-Albemarle iyakonyuka iphindwe kahlanu ngo-2030E, ngokukhawuleza ukufumana iziphindaphindo zamaxabiso. ”
Ngeso sizathu, amaxabiso eBray athengisa, ngexabiso elixabisa i-280 yeedola elilingana neenyanga ezili-12 ngaphezulu kwe-30%.
Kuxhomekeka kwindawo ojonga kuyo, ixabiso ekuvunyelwene ngalo liphantsi kakhulu ekujolisweni nguBray- umzekelo kwi-229.81 yeedola ukusuka kubarhwebi abangama-23 abagubungele isitokhwe, njengoko kuchaziwe yiStockopedia.
Iitipranks zithengisa isitokhwe ngokuthenga okuphakathi kunye nexabiso ekujoliswe kulo leedola ezingama-254 ukusuka kubarhwebi abali-16 nge-18% ephezulu kwixabiso langoku.
I-lithium eluhlaza umngcipheko wokhuphiswano
Nangona kunjalo, kukho imingcipheko ejongene nenkampani ye-lithium yeshishini ngokuma kwe-lithium eluhlaza, njengoko i-automakers kunye nabanye bafuna iindlela ezinobungozi bendalo zokumbiwa kwesinyithi.
Umzekelo, iBill Gates's Breakthrough Energy Ventures yenye yeenkampani eziphuhlisa iinkqubo zokutsala i-lithium (DLE) ngokuthe ngqo ukuya kuthi ga apho imveliso yorhwebo inokwenzeka khona. Izicwangciso zokuqalisa ukusebenza kwazo ziqhubeke kwisithuba seminyaka emibini.
Itekhnoloji ye-DLE ifuna umhlaba omncinci kunye namanzi aphantsi komhlaba kunemigodi yemveli yamatye alukhuni kunye namachibi okhupha umphunga asetyenziselwa ukumba kunye nokucokisa isinyithi esimhlophe okwangoku.
Kodwa u-Albemarle uthi ujonge i-DLE kwaye akacingi ukuba iitekhnoloji zizakulunga kude kube sekuqaleni kwee-2020s, becinga ukuba abaxhasi bayo banako ukusombulula iingxaki malunga nokusetyenziswa kwamandla aphezulu kunye nemfuno yamanzi acocekileyo. "Ukufikelela emanzini acocekileyo sesinye sezithintelo eziphambili kwi-DLE," utshilo uJohn Peichel waseSuez Water, umboneleli ngezixhobo kwishishini le-lithium.
Sikala isitokhwe seAlbemarle ixesha elide lokuthenga.
Ungathenga iAlbemarle kwiqonga lotyalo-mali lwe-eToro nge-0% yekhomishini.
tags IAlbemarle, Izabelo ze-EV, lithium